छोरा नजन्माएको भन्दै श्रीमती माथी चरम यातना, गाँउपालिका अध्यक्षबाटै कुटिए सर्वसाधारण ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
छोरा नजन्माएको भन्दै श्रीमती माथी चरम यातना, गाँउपालिका अध्यक्षबाटै कुटिए सर्वसाधारण ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Mar 21, 2018
छोरी जन्माएको भन्दै श्रीमतीलाई यातना, व्यक्ति लगाएर सामुहिक बलत्कारको प्रयास
कैलाली । छोरा नभई छोरी जन्माएको भन्दै अझैँ पनि महिला माथि हिंसा हुन्छ समाजमा । छोरा नजन्माई २ छोरी जन्माएको भन्दै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ कि २५ बर्षीय कविता जोशीलाई आफ्नै श्रीमानले अन्य व्यक्ति लगाएर सामुहिक बलत्कारको प्रयास गरेको पिडित युवती बताउछिन् ।
दार्चुलाको गोकुलेश्वर घर भएका आफ्नै श्रीमान धनञ्जय जोशीले साथीहरु लगेर बलत्कार प्रयास गरेपनि उनी भाग्न सफल भएको बताउछिन् ।
५ बर्ष अघि प्रेम विहे गरेका उनीहरुका २ छोरी छन् । छोरी जन्माएको भन्दै धनञ्जयले यस अघि पनि पटक पटक कहिले साथीहरु लगेर बलत्कार प्रयास गर्ने, कहिले मदीरा सेवन गरेर कुटपिट गर्ने गरेपछि उनी डेरा लिएर छुट्टै बस्दै आएकी छन् ।
पटक पटक डेरा परिर्वतन गर्दा पनि श्रीमानले खोजे २ छोरी र आँफुलाई कुटपिट गर्दै आएको उनि बताउँछिन् ।
श्रीमानबाट आजीत भएकी कविता ईलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती कार्यालयमा जाँदा प्रहरीले श्रीमान श्रीमतीको झगडा घरमै मिलाउनु भन्दै फर्काउने गरेको उनको गुनासो छ ।
प्रहरीको जवाफ पछि धनजञ्यले आफुलाई कसैले कही गर्न नसक्ने भन्दै झनै यातना दिइरहेको उनी पिडित युवती बताउँछिन ।
सप्तरीमा गाँउपालिका अध्यक्षबाटै सर्वसाधारण कुटिएपछि…
सप्तरी । गाँउमा हुने धेरै जसो समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरु नै अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानिय तहमा हुने न्यायक समितिले यस्ता समस्याको निरुपण गर्न सक्छ ।
तर जब समस्या समाधानको सर्वसाधारण गाँउपालिका अध्यक्षसामु पुग्दा उनीबाटै कुटिन्छन् भने न्यायको के आश गर्ने ।
यस्तै भएको छ सप्तरीको विष्णुपुर गाँउपालिकामा । स्थानीय चोकबजारमा दैनिक जसो चोरीका घटना भएपछि स्थानियले गाँउपालिका अध्यक्ष लिलाम्बर यादवको मा पुग्छन् ।
तर चोरी गर्ने अध्यक्षकै भतिजा भएपछि चोरलाई कारवाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टै गुनासो गर्न पुगेको स्थानिय माथि जाइलाग्छन् ।
उनले स्थानिय अनिलकुमार साहलाई निर्घात कुटपिट गर्छन । कुटपिटबाट घाईते साहको छाती, कम्मपर, पेट, पिठ्यूँ लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक रहेको काराण उपचारमा ११ हजार बढी खर्च भएको छ ।
अनिलका अनुसार चोरका आरोपित सचिन यादवले उनलाई पटक पटक धम्की दिएका थिए । स्थानियका अनुसार गाँउपालिका अध्यक्षले चोरीमा आफ्नो भतिजको संलग्नाता रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
साथै उनीहरुले गाँउपालिका अध्यक्षलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । पिडित पक्षले आफु न्यायका लागि कानुन बमोजिम जाने बताई रहँदा गाउँपालिका अध्यक्ष भने स्थानिय स्तरमै मिलापत्रको कुरा गरिरहेका छन् ।
एकजना चिकित्सकको भरमा ५० शैयाको जाजरकोट जिल्ला अस्पताल
जाजरकोट । ५० शैयाको जाजरकोट जिल्ला अस्पताल एक जना डक्टरको भरमा चलिरहेको छ ।
९ जना चिकित्सकको दरबन्दी भएपनि अस्पलतामा एक जना मात्र डक्टर छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयलका अनुसार डा.सन्दिप किरण प्रधान, डा. धर्मराज रेग्मी, डा कृष्ण जंग शाह तर यी तिनै जना चिकित्सक बिदामा छन् ।
एमडीको परिक्षाको लागि उनिहरु अध्यन बिदा मा बसेका हुन् । केही दिन देखि एक्लै अस्पताल धानीरहेका डा. अमिन शाह पनि अहिले काठमान्डौमा कन्फेरेन्स् मा छन् ।
२ दिन अगाडी डा केशब जंग कार्की अस्पताल पुगेका छन् । अहिले पनि उही एक जना डाक्टरले ५० बेडको जिल्ला अस्पताल धान्नु परेको छ ।
चिकित्सक नहुँदा जिल्ला अस्पताल एउटा सामान्य मेडिकल जस्तो भएको छ । आएका बिरामीलाई रुकुम र कोहलपुर रिफर गर्ने गरिएको छ ।
स्त्री तथा प्रसुती रोग बिशेषज्ञ नहुदा महिलाहरु जोखिमका साथ घरमै बच्चा जन्माउँन बाध्य छन् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठान ले काजमा स्त्री तथा प्रसुती रोग बिशेषज्ञ पठाउदै आएको मा एक महिना देखि त्यो पनि पठाएको छैन ।
जाजरकोटमा एक त चिकित्सकको दरबन्दी परिपूर्ति छैन, अर्को भएको चिकित्सक पनि कहिले अध्यन बिदामा बस्ने कहिले तालिम र सेमिनारका लागि काठमाडौं धाउने गर्दा अस्पतालमा डक्टर विहिन हुन्छ ।
डक्टरहरु जजारकोट मात्र नभई कर्णाली र सुदुपश्चिमका अन्य अस्पतालहरुमा पनि जान मान्दैनन् । एमबिबिएस सकेका अठौ तहका चिकित्सक दुर्गम जान तछाड मछाड गर्छन् तर मास्टर्स गरेका बिशेषज्ञ चिकित्सकले भने सुगम बस्न भए भरको पावर लगाउँछन् ।